Ministeerri Eegumsa Fayyaa naannolee biyyattii dhibeen busaa itti baay’aatutti agoobara miiliyoona 20 oli raabsuufi – Fana Broadcasting Corporate
Ministeerri Eegumsa Fayyaa naannolee biyyattii dhibeen busaa itti baay’aatutti agoobara miiliyoona 20 oli raabsuufi
Finfinnee, Eebila 1, 2011(FBC)-Ministeerri Eegumsa Fayyaa naannolee biyyattii dhibeen busaa itti baay’aatu hundaaf agoobara miiliyoona 20.5 raabsuuf hojjechaa jiraachuu beeksiseera.
Ministeera Eegumsa Fayyaatti qindeessaan garee to’annaa dhibee busaa obbo Maabraahitoom Hayilee turtii FBC faana godhaniin naannolee biyyattii dhibeen busaa itti baay’aatutti agoobara miiliyoona 20.5 raabsuuf hojjetamaa jira.
Ministeerichi agoobara raabsuuf karoorfate keessaa miiliyoonni 10.3 baajata Ministeera Eegumsa Fayyaan kan cufamu yoo ta’u, hanga ammaattis agoobarri miiliyoonni 4.5 bitamuus danda’eera jedhaniiru.
Agoobarri hafe immoo dhaabbata deeggarsaa Ameerikaan kan cufamu ta’uu kan ibsan qindeessichi Ministeerri Eegumsa Fayyaa gocha kanaaf kan oolus Doolara Ameerikaa miiliyoona 28 ramaduu dubbataniiru.
Agoobaroonni kunneen hanga ji’a Caamsaatti walitti funaanamanii xumuranii hojiin raabsuu immoo hanga xumura ji’a Waxabajjii 2011 kan gaggeeffamu ta’uu kaasaniiru.
Sadarkaa idil addunyaatti waggaa waggaan namoonni biiliyoona 1 oli dhibee busaan kan qabaman yoo ta’u, dhibee kanaan waggaan lubbuun lammiilee miiliyoona 1.3 olii akka darbus ragaan Dhaabbata Eegumsa Fayyaa Idil Addunyaa ni mul’isa.
Teessumni lafa Ityoophiyaa %75 walhormaata dhibee busaaf kan mijatu yoo ta’u, naannolee kanas lammiileen miiliyoona 60 ta’an ni jiraatus jedhameet tilmaamama.
Erga biyyattiitti sagantaan iksiteeshinii fayyaa hojiirra ooluu qabee garuu hammi lammiilee dhibichaan qabamanii fi lubbuu isaanii dhabanii lakkoofsi isaanii yeroo gara yerootti hir’achaa dhufuu ragaan Ministeericha irraa arganne ni mul’isa.